GIMP 2.8 Miyay u qalantay sugitaanku? | Laga soo bilaabo Linux
Tina Toledo | | GNU / Linux, Kuwa kale
1 GIMP 2.8 Miyay u qalantay sugitaanku?
2 Photoshop's mono-window
3 GIMP 2.8-daaqad kali ah
GIMP waa, shaki la'aan, mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan adduunka GNU / Linux oo isla jaanqaadaya Inkscape y Scribus saddex-geesoodka oo ah xalka kuwa annaga naga mid ah ee xirfad ahaan ugu heellan naqshadeynta garaafka. Asal ahaan laanta farshaxan garaafyada. Gaar ahaan GIMP ayaa loo isticmaalay in lagu doodo in waxa kaliya ee ka hor istaagaya xirfadlayaal qaabeynta qaabeynta inay u haajiraan GNU / Linux waa jaahilnimo, raaxo iyo xitaa caajisnimo aan loo rabin barashada wax cusub. Qaar ka mid ah sababaha dhabta ah ee caqabadda noocaas ah, waxaan u sharaxay sida ugu fiican ee aan kari karo mowduuca GIMP ... meesha haa iyo halka mararka qaarkood.
GIMP 2.8 waxay abuurtay rajo aad u weyn, mana ahan wax badan sababtoo ah isbeddelka asalka laakiin, halkii, sababtoo ah waxa loo maleynayay inay dib u habeyn ku sameyneyso marka la eego maareynta meelaha shaqada, santuuqa iyo aaladaha ... iyo si saraaxad leh ayey u sameeyeen. .
Mid ka mid ah qaladaadka waa weyn ee kooxda GIMP wuxuu isku dayayay inuu ku daydo jidka Photoshop gacanta ku sanduuqyadooda, laakiin inta wax soo saarka ee Adobe waxay ka dambeysaa qaabeynta qaab dhismeed koox wax badan ka og dhismaha iyo hirgelinta isdhaafsiga wax soo saarka, kuwa GIMP Waxay iska indhatireen hal mar, iyo markale, iyo markale waxaan dhab ahaan ugu baahanahay naqshadeyn iyo xirfadlayaal farshaxan garasho si ay ugu rogaan aalad lagu kalsoonaan karo, oo si fudud loo isticmaali karo oo aadan u baahnayn inaad sugto, sidoo kale, waxaa laga heli karaa keydinta dawooyinka aad u adeegsato inaad ku rakibto dhibaato la'aan.
Horey waxaan uga cudurdaaranayaa sawirada aan u adeegsan doono in aan ku tusaaleeyo tusaalayaashayda, laakiin way ii fududaatay inaan rakibo GIMP en Windows 7 in gudaha Linux Mint Maya.
Dhibaatada qaabka daaqada keliya ayaa ku jirta GIMP 2.8 waa inay ku qasbeyso sanduuqa aaladda bidix iyo sagxadaha midig.
Fikradda soo bandhigida sanduuqyada qalabeysan ee burburay iyo kuwa recessed ma ahan fikrad xun, runtiina Adobe si fiican ayey ugu shaqeysay isaga. Xitaa asal ahaan waa fikrad isku mid ah in nidaamyada hawlgalka ay u qaateen sidii shaashadda desktop -Midnimada y Windows 8, tusaale ahaan- iyo qayb ka mid ah sirdoonka oo loo maro hal ama in ka badan Docks Waxaan haysan karnaa feylal iyo / ama shaqeynaya qaab fudud, dareen leh oo matalaya meel bannaan.
Hadday taasi ahayd fikirka dadka horumaraya GIMP Meeday haddaba dhibaatadu?
Aan marka hore aragno sida kuwa Docks en Adobe Photoshop si loo fahmo mabaadi'da shaqadeeda:
1.-Dhanka bidix waxaan ku aragnaa sanduuqa aaladda iyo midigta oo taxane ah oo laba iyo toban palettes ah, labada xaaladoodba waxaa lagu dhex daray hal daaqad. Xagga sare, ka hooseeya menusyada, waxaan leenahay baarka soo bandhigaya astaamaha iyo shaqooyinka qalabka shaqada.
2.-Waxyaabahani iyo shaqeyntooda ayaa isbeddelaya, baarka sare, sida ku cad aaladda la doortay.
3.-Baarka dhanka bidix is ​​dulsaaran, si toos ah, balastarrada aan isticmaaleyno, a «Dhagsii» Astaanta mataleysa palette kasta, waxay u muujineysaa inay awood u leedahay inay isticmaasho. Qaabka la kala saaray, santuuqa kasta ayaa lagu cabirayaa cabirka nagu habboon annaga oo aan saameyn ku yeelan cabirka Dock iyo kulaylaha kale.
GIMP 2.8-daaqad kali ah
Hadda maxaa sababay, aragtidayda, daaqadda-daaqadda ee GIMP leeyahay cilladaha halista ah? Waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxo naftayda sida ugu fiican ee aan awoodo.
Muhiimadu may ahayn in laga sameeyo goob shaqo daaqad keliya, laakiin waxay ahayd in la sameeyo hal daaqad oo bixisa faa'iidooyin marka la eego ku habboonaanta goobta shaqada iyo in marka lagu shaqeynayo qaabkaas -daaqad keliya- helitaanka aaladaha iyo santuuqa shaqada ayaa ahaa mid dhakhso badan oo dareen leh.
Aynu aragno oo aan falanqeyno sida goobta shaqadu ugu ekaato qaab daaqad keli ah GIMP 2.8
Dhibaatada ugu horreysa ee naqshadeynta ayaa ah in baarka ay ku jiraan qalabka shaqada -a la derecha- Way adag tahay in la isticmaalo haddii qalab kasta aanu ku leenahay hal tiir. Qeyb ka mid ah qalabka ayaa qarsoon iyadoo aan suurtagal ahayn in la helo, haddii aan loo qaabeynin laba tiir:
Inkastoo xataa GIMP 2.8 wuxuu leeyahay qalab ka yar Photoshop Suurtagal ma ahan in si sax ah loogu isticmaalo qaab hal-daaqad haddii aan leenahay toolbar hal khad. Dhibaataduna ma aha cabbirka astaamaha laakiin waa ku habboonaanta qaybinta.
Aynu isbarbar dhigno markale:
Iyadoo Photoshop qalabkaaga u qaybi koox ahaan, GIMP 2.8 maya. Tan macnaheedu waa in GIMP 2.8 astaan ​​kasta oo aalad ah waxay leedahay meel bannaan, xitaa haddii ay ka yar yihiin, waxay umuuqdaan inay badan yihiin. Sawirka ayaa tusaale u ah sida ku jirta Photoshop oo leh a «Dhagsii» waxaan soo bandhigi karnaa ikhtiyaarka aan ku leenahay illaa afar nooc oo kala duwan oo isku qalab ah hal astaan ​​ama badhan, intaad ku jirto GIMP waxay qaadataa laba jeer booska si loo muujiyo kaliya laba qaab oo isku qalab ah.
Wax la mid ah ayaa ku dhaca palettes-ka qaabka mono-window GIMPhalka Photoshop samee bar taagan GIMP xirmooyin, ma dumo, balastarrada oo ku kala bixi taxan taxane tab ah si loogu oggolaado helitaanka santuuqa kasta. Nidaamkan jiifka ah ee kuleylaha ayaan matalin wax faa iido ah oo booska ah, maxaa yeelay marka lagu daro qabsashada booskaas jiifka ah wuxuu sidoo kale fadhiyaa gebi ahaan tooska. In kasta oo ay run tahay in xidhmooyinka balastarrada gacanta lagu qarin karo tani ma aha mid wax ku ool ah, maxaa yeelay markaa waa inaanu dhaqaajinnaa baaxadda ay ku dhegan tahay si aan u aragno tabka oo aan u heli karno.
Laakiin, marka lagu daro, gudaha GIMP 2.8 Ama qaabka daaqada kali ah ama darbiyada sabeeya ayaa loo adeegsaday… ma jirto qaab lagu kala doorto inta u dhexeysa gundhigga guntin ku dhegsan midigta iyo ka tagida kuwa kale oo sabeynaya isla waqtigaas.
In kasta oo ay run tahay qaabka daaqadda keliya ee ku jirta GIMP 2.8 waxay u taagan tahay faa iiddo gaar ah markaad la shaqeyneyso dhowr sawir isla waqtigaas, isla faa iidadaas ayaa luntay habka aan waxtarka laheyn ee isku soo aruurinta santuuqa iyo qalabka shaqada. Aragtidayda waa inay ahaadaan laba hawlood oo kala duwan; mid ururinaysa dhammaan qaybaha kaladuwan ee shaqada tabs iyo mid kale oo kuu oggolaanaya inaad kala doorato inta u dhexeysa adeegsiga darbiyada sabeynta aaladaha iyo boodhadhka ama ku rakib daaqad keliya, sidaad adiguba sameyso. Photoshop.
Waxaan sidoo kale aaminsanahay in kooxda horumarinta ee GIMP Waxaa seegay fursad weyn oo aan kaga shaqeyn lahaa dhibco xanuun kale oo waxtar badan ka heli lahaa marka loo eego hal daaqad keliya, sida hab wax ku ool ah oo wax looga qabanayo maaskarada lakabka si loogu hagaajiyo midabka ama muuqaal ahaan CMYK hooyo Taabadalkeed, waxay fureen waji kale oo cilado ah hagaajinta taas oo macnaheedu yahay in dadaalka kooxda yar ee horumariyayaashu ay kala firdhi doonaan maaddaama ay dhibaatooyin badan haystaan ​​xallintooda.
Mid ka mid ah laba aqriste ayaa hubaal ku dhawaaqi doona »Dhaleeceynta lacag la’aanta ah ee koox aad u tiro yar ayaa gebi ahaanba micno la’aan ah.». Adiguna waad saxantahay… hadii dhaleeceyntaydu ay salka ku haysay. Laakiin sidoo kale, miyaynaan ahayn kuwa naftooda u huray naqshadeynta iyo farshaxanka garaafka inaynu xaq u leenahay, iyo aqoonta waayo-aragnimadu siiso, inaan ku cabirno aragtideena iyadoo ujeeddadeedu tahay hagaajinta wax soo saar la filayo, inuu doonayo inuu noqdo aalad waxtar noo leh?
Waxaan rajeynayaa mararka qaar ... kaliya hal mar nacalad, kooxda horumarinta ee GIMP na weydii waxa aan runtii u baahanahay halkii aan ka fikiri lahayn. Ama ugu yaraan aqri talooyinkayaga kuwaas oo, rumee, inay badan yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » GIMP 2.8 Miyay u qalantay sugitaanku?
Sida had iyo jeer, Tina, maqaalladaadu way i xiiseeyaan maxaa yeelay si wanaagsan ayaa loo qabtay oo loo dooday. Waan ku faraxsanahay inaan markale ku aqriyo. Sidii aan horeyba u iri, ma ahi xirfad yaqaan meelaha la xiriira naqshadeynta, laakiin mararka qaarkood waxaan u adeegsadaa GIMP si aan ugu wareego baahiyaha qaarkood.
Sideen jeclaan lahaa inaan sifiican u isticmaalo qalabkan weyn. Waxaan rajeynayaa inaan la jaanqaadi karo isbeddelada, in kasta oo ay u horseedi doonto dhibaatooyin qaarkood sababta oo ah waxaad ku sharaxday maqaalkaaga.
Aad baad u mahadsan tihiin waxaanan rajaynayaa inaad sii wadidoonaan iskaashi inta badan ka socda Linux.
Goor dhow ayaan idin arki doonaa!
joe di castro dijo
Ma noqon doonto fikrad xun in la barto sida loo isticmaalo GIMP 2.8 si sax ah ka hor inta aan la sameynin iyada oo loo eegayo bayaannada qeexan,
Laakiin, marka lagu daro, GIMP 2.8 midkood daaqad-daaqad ama baalayaasha sabayn ayaa loo isticmaalay ... ma jirto qaab lagu kala doorto inta u dhexeysa gundhigga guntin ku dheggan dhinaca midig iyo kuwa kale oo looga tagayo isla waqtigaas.
Ku jawaab joe di castro
Joe, gabi ahaanba waad saxantahay aduunka. Aad baad ugu mahadsantahay sixitaanka qaladkaas aniga ah. Waxa aadan sameyn karin ayaa ah inaad iska furto qeeybta dhanka bidix.
Si kastaba ha noqotee qaladkeyga -taas oo aan qirayo inay tahay qalad weyn- kama yarayn doono hadalkayga:
Aragtidayda waa inay ahaadaan laba hawl oo kala duwan; mid ururinaysa dhammaan aagagga shaqada ee kaladuwan iyo mid kale oo kuu oggolaanaya inaad kala doorato inta u dhexeysa adeegsiga darbiyada sabeynta qalabka iyo santuuqa ama ku dheji daaqad keliya, sidaad adiguba u sameyso oo kale Photoshop.
Looxyadu waa kuwo laga saari karo ama aan ahayn, runta ayaa ah habka loo marayo GIMP 2.8 Isku soo xoorida markii aad barroosinka dhigato waa xal xun ... haddii waxa aad raadineyso ay yihiin wax soo saar oo aan tusaale u noqon doono:
Nota: Si aad u muujiso sawirka cabbirka dabiiciga ah, fadlan "dhagsii" sawir kasta oo yar.
Sawirada 1 iyo 2 waxay muujinayaan aagga shaqada oo leh shan alwaax oo isku dhafan oo bidix ah. Sawirka 1-aad ayaan isugu geeyay koox ka kooban shan, halka sawirka 2-aad waxaan ku tusayaa inay ku uruursan yihiin saddex koox: mid ka mid ah laba -déba-, mid ka mid ah -dhexe ee- iyo mid kale oo laba ahhoos-
Sawirka 3 wuxuu muujinayaa isla shan shaashadood, laakiin sida palette sabeynaya.
Haddii aan isbarbar dhigno saddexda goobood ee shaqada, waxaan arki karnaa in midka ku jira tusaalaha saddexaad uu wax soo saar badan leeyahay sababo fudud oo ah in baallooyinka aysan qaadan inta ugu badan.
Muhiimad weyn ma leh haddii joornaalada ay ku xiran yihiin iyo in kale. Qodobka udub dhexaad u ah ayaa ah GIMP waxay u soo bandhigaysaa qaabkan daaqada kaliya inuu yahay horumar marka ay xaqiiqdu tahay hawl aan dhammaystirnayn oo cilladaysan -in aan si xun loo dhaho- iyo in, intaa waxaa dheer, waxay awoodeen inay adeegsadaan dadaalkaas si ay u sameeyaan horumar dhab ah oo muhiim ah sida maaraynta saxda ah ee sawirrada RAW, tusaale ahaan.
Bisad Xawaare ah dijo
Gacaliye Tina Toledo.
Waxaan ka helay nuxurka iyo qoraalka maqaalkaaga mid aad u fiican. Waxaan kaloo ka faaiidaystay fursad aan ku aqriyo maqaalka kale ee aad sheegaysid sidoo kale wuxuu umuuqday mid aad u wanaagsan
Waxaan u maleynayaa inaan sifiican u fahmay doodahaaga, in kasta oo nasiib daro, laga yaabee inaysan ahayn waxa ay ka kooban yihiin. Wax ku darsigan miyuu yahay, inta badan, soo-jeedinta in daaqadda dukumeentiga ay leedahay daboollo inkasta oo aaladaha ay ka go'een? Waxay umuuqataa ikhtiyaar xiiso leh. Soo jeedinaysaa qaabka "dock" ee qalabka wax lagu duubo? Waxaan u maleynayaa inay waxtar yeelan karto.
Dhanka kale, waa inaan kuu sheegaa in maqaalkaaga (waliba kan ku saabsan "meesha haa iyo halka mararka qaarkood") murugo igu reebayso. Waa asalkaas aanan sifiican u fahmin oo aanan jeclayn taasna waa iga murugootay. Ku ciyaarista cilmi-nafsiga-bisad, haddii aad ii ogolaato, waxay ila tahay inaad iskudayeyso inaad qiil u hesho naftaada, inaad u aragto in softiweerka bilaashka ah uu kafiican yahay (sabab kastoo jirta) laakiin adiga, inaad tahay xirfadle weyn (waxayna umuuqataa iyadoo cadeyneysa inay aheyd mid kale ujeeddooyinka maqaaladaada) uma isticmaali kartid sababo la xiriira caqabadaha waaweyn ee aad la kulanto.
Haa, waan fahamsanahay caradaada kooxda GIMP, ima aysan soo wicin markan si ay i weydiiyaan waxyaabaha aan jeclaan lahaa inay ku soo kordhiyaan nuucaan cusub. Sidoo kale, haddii aysan waligood la tashan kuwa sida dhabta ah wax u og, sidee ayey u horumarin doonaan?
Waxaan aad u jeclaan lahaa inaan ka helo gunaanadka maqaalladaada wax la mid ah, marka la soo koobo, barnaamijka noocan oo kale ah farsamo ahaan wuu ka liitaa midka kale, laakiin inaad u isticmaasho maxaa yeelay waa bilaash anshaxuna waa adiga, sida hooyo ku jirta in ka badan 90% shaqo, aad ayey uga muhiimsan tahay "midabyada tirooyinka tiirarka toosan loogu qoro" iyo sababta oo ah waad ogtahay, sida jazz lover, in "Charlie Parker wanaagsan" uu awood u leeyahay inuu bixiyo riwaayad heer sare ah xitaa saxanka caagga ah.
Aniga oo ah aabaha boqolaal bisadood, waxaan door bidi lahaa inaan ka tago adduun xor ah (iyo waxa ay tilmaamayso) dhaxal ahaan mid ka farsamo ahaan horumarsan. Horumarinta allabariga, hoos u dhac, halkii aad addoon ugu noqon lahayd afar shirkadood oo waaweyn. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u maleynayaa in sidaas la sameeyo, mustaqbalka fog, ay u oggolaan doonto wax badan (iyo wixii ka sarreeya, ka sii wanaagsan) horumarka farsamada.
Aad baad ugu mahadsantahay la shaqaynta barnaamijka bilaashka ah.
Bisad murugo leh, ma buluug.
Ku jawaab Veloz Cat
Bisad Xawaare ah:
Kuma khaldanid wax kasta markii, layligaa aad sameysay, aad isku daydo inaad isaga ka dhigto cilmi-nafsi yaqaan. Runtii maqaalka GIMP ... meesha haa iyo halka mararka qaarkood waa qiil dhankeyga:
(Laga soo bilaabo lat. Iustificatĭo, -ōnis).
1. f. Waxqabadka iyo saameynta cudurdaarista.
2. f. Sabab, ujeedo ama sabab macquul ah.
3. f. U hogaansanaanta waxa xaqa ah.
4. f. Caddayn laga sameeyay dambi la’aan ama wanaag qof, fal ama shay.
5. f. Caddayn wax ku kalifaysa
Laakiin maahan cudurdaar:
(Laga soo bilaabo lat. Praetextus).
1. m. Sabab ama u ekeysiin ama sabab muuqata oo lagu eedeeyey inay wax qabato ama ay ku marmarsiiyooto inaanay samayn.
Si kastaba ha noqotee, waad ku qaldan tahay inaad u maleyneyso in qoraalladayda ay qoran yihiin si loo isku dayo in loo muujiyo taas "Waxaan ahay xirfadlaha weyn" Adiguna qofna ma tihid, gabi ahaanba cidna, si aad u xukuntid ujeedooyinkeyga. Ma tihid saaxiibkey, shaqsiyan ima taqaanid, weligeen xiriir shaqsi ah nama soo marin mana aanan waligey ku siinin xorriyad inaad kalsooni ku qaadatid inaad qof ahaan igu xukuntid.
Haddii doodaha aan u isticmaali jiray "qiil" mowqifkayga ku saabsan GIMP Qalab ahaan waxay umuuqdaan kuwa laga doodi karo, iyaga beeni! Taasi waa xaqaaga maxaa yeelay waxa miiska wada hadalka ku jira waa doodahayga ... shaqsiyan maahan.
Waxaan ku siinayaa war kale, weligaa MA AHA! Waxaad aqrin doontaa maqaalkeyga oo aan ku xaqiijinayo inaan u adeegsado tan ama barnaamijka naqshadeynta, qalab shaqo, maxaa yeelay waa "Akhlaaq ahaan sax"Kawaran hadaad akhriyi doonto waa inaan isticmaalo maxaa yeelay sifiican ayey iiga adeegtaa. Bar.
Aniguna sidoo kale waxaan cadeeyay inaanan kuu ogolaan doonin inaad anshaxdayda maxkamad saarto sababaha aan horay u sharaxay: ma tihid saaxiibkey, kumana tixgaliyo saaxiibkey, weligaa ma codsan ogolaanshahayga inaad ku kalsoonaato aniguna ma aanan siin. Waan ku celinayaa hadii ay kugu cadaato markii ugu horeysay.
Kuma raacsani taas wanaag "Charlie Parker" awoodaa inaad bixiso riwaayad aad u fiican oo leh saxophone caag ah. Wuxuu noqon doonaa mid karti badan laakiin hibadaasi waxay ku koobnaan doontaa awooda saxophone -ha ahaado caag ama bir kasta oo kale-, Waxay u badan tahay inaad heli doonto dhibco ka fiican kuwa kale ee jazz-yada ah ee hibada yar leh waana hubaa inaysan u isticmaali doonin saxankaas balaastigga ah riwaayadohooda halista ah.
Waxaa ii cadaatay inaynaan saaxiibo ahayn, oo aydaan sidan ii tixgelinayn idinkuna aadan ii idmanayn. Aad ayey u xun tahay, maxaa yeelay waxaan rabaa inaan qof walba saaxiib la noqdo; markay iga baxaan dabcan.
In kasta oo aan caado u leeyahay inaan xukumo wixii aniga ila habboon aniga oo aan sugin cidna inay i siiso ogolaansho aan ku sameeyo, haddana waxaa ii soo baxday in tijaabadan tijaabada ah aad khaldantay, anigu ma aanan xukumin akhlaaqdaada laakiin waan ka codsaday. Waxaan u sameeyay si aan u soo bandhigo qodob ka mid ah tixgelintaada ku saabsan barnaamijyada bilaashka ah: anshaxa, taas oo aniga muhiim ii ah nidaam kasta oo nolosha ah iyo gaar ahaan barnaamijka lacag la'aanta / lahaanshaha ee software-ka. Way ku cadahay tuducaaga aad ku leedahay inaad barnaamij isticmaasho maxaa yeelay wuu kuu adeegaa (muddada) in aysan adiga ahayn wax go'aaminaya adiga. Dhanka kale, tan waxaad miiska saareysaa oo aad ku bixinaysaa inaad ku xukuntid kuwa annaga kuu akhriyaya.
Ilaa aad ka hesho macluumaad gacan-hore ah oo ku saabsan horumarinta GIMP, oo aanan garanayn, sidoo kale waxaan u arkaa is burinaya waxaad iiga jawaabto oo ku saabsan xukumidda ujeeddooyinka.Mise miyeyna xukumin ujeedooyinka kooxda GIMP inay sheegaan inay isku dayaan ku dayashada hawlgalka sanduuqyada qalabka ee barnaamijkaas kale ee aad ka hadlaysid?
Gacaliye Tina Toledo, fadlan, ha u tixgelin ra'yigeyga inuu yahay mid lagu weerarayo qofkaaga laakiin, si kasta oo ay tahay, hadalkaaga. Sida aad si cad ugu iftiimisay jawaabtaada, shaqsi ahaan kuuma aqaan, marka waxaad fahmi doontaa inaan si dhib leh wax ugu haysto adiga, badiyaa, oo ka dhan ah doodahaaga.
Iyadoo aan loo baahnayn.
Bisad Xawaare ah
Uma tixgalin doono faallooyinkaaga inay yihiin shaqsiyaad shaqsiyadeed inta ay ka madax banaan yihiin kaftan iyo aflagaaddo.
Adiga ayaa muujiyay:
Ciyaarista cilmi-nafsiga-bisad, Hadaad ii ogolaato,
Waa hagaag maya, anigu ma ogola. Markaa mise si cad baa loo fahmay si aad wax u fahanto? Waxba igama gelin caadooyinkaaga, gaar ahaan ka garsooridda wixii umuuqda mid ku habboon iyadoon cidna ku siin oggolaansho -Waxaan qiyaasayaa in anshaxaagu hadii uu kuu ogolaanayo xorriyadahaas-
Halkan uma joogo inaan ku qoro heshiisyo ku saabsan anshaxa. Waxaan diirada saarayaa soo bandhigida, ilaa iyo inta waqtigeyga iyo awooddeyda ay ii oggol yihiin, dhinacyada naqshadeynta iyo shaqeynta aniga oo aanan u gudbin dhibaatooyinka waxa "Anshax ahaan waa sax oo la aqbali karaa sida he-iyo-sidaas ay aaminsan tahay"Iyo weedhayda:
waxay ku wajahan tahay dareenkaas. Ha khaldamin, kor u qaadista iyo kor u qaadida barnaamijka bilaashka ah kuma xirna kaliya waxa anshax ahaan saxda ah. Akhlaaqda iyo anshaxu waa qayb ka mid ah qiyamka taxanaha ah ee ay tahay in kor loo qaado, waan ku raacsanahay taas, laakiin qiyamkaasi waxay ku xidhan yihiin waxqabadka barnaamijka -bilaash ama mid gaar ah-
Guntii iyo gunaanadkii: riwaayaddu waa mid wanaagsan, dhexdhexaad ah, ama xun iyada oo aan loo eegin anshaxa iyo qiyamka anshaxa.
Markaa waad fahmi doontaa inaan si dhib leh wax kuugu haysto, sida ugu wanaagsan, doodahaaga.
Hadday sidaas tahay markaa dooddayda beeni. Kuma mashquuli doono. joe di castro wuu i saxay waanan ku qanacsanahay. Haddii doodahaygu khaldan yihiin oo aan khaldanahay, waxaad gebi ahaanba xor u tahay inaad adeegsato xaqaaga aad u beeniso, maxaa yeelay taasi waa waxa layligani ku saabsan yahay: barashada.
jlbaena waxay qaadatay dhibaatada si ay kuu siiso xiriiriyeyaal mowduucyo kale oo isku mid ah oo sidee tahay aragtidaadu?
Nasiib darrose ma awoodin inaan akhriyo isku xirka labaad: dhakhtarkayga indhaha ayaa si adag looga mamnuucay inuu ku akhriyo warqaddaas asalkaas. Maxaa ku saabsan Miyaad u mahadcelineysaa kooxda GIMP waxtarkoodii fiicnaa iyo naf-hurnimadii ay ku bixiyeen barnaamijka bilaashka ah?
Xidhiidhka seddexaadna, ma ogi inay nooc kaftan ah tahay. Maxaad uga jeeddaa, inay taasi tahay "dib u dhaca tikniyoolajiyadda"?
Oo waxaan u malaynayaa in weedh ka mid ahi ay soo koobayso waxaad u malaynayso:
Miyaad u malaynaysaa inaan jeclahay akhrinta wax sidan oo kale ah?
Sida iska cad maya.
Waxaan u maleynayaa inay tahay waxtar yar in la yiraahdo "wali way ka sii xun tahay."
Marka loo eego maxaa noqon lahaa, haddaba, tabaruc xaq ah? Mid kasta oo ka mid ah qorayaasha mowduucyada aad quudhsatay wuxuu dhib ku qaatay inuu ugu yaraan hal ama laba saacadood ku qaato qoraal, doodo aad u wanaagsan, aragtidooda. Maqaal walbana wuu ka sii fudud yahay mid fudud "wuu sii xumaanayaa."
Qof kastaa wuxuu ku darsadaa wuxuu awoodo, intii karaankiisa ah oo intii karaankooda ah ku sameeya horumarinta softiweerka bilaashka ah waxayna ila tahay aniga haddii koox xirfadlayaal naqshadeeyayaal ah dhahaan in wax qaldan yihiin GIMP maahan wax fursad ah. Ma ahan xanaaq shakhsiyeed.
Uma aaminsani taas xaqiiqda fudud ee GIMP xor noqo waa inaan aamusnaa. Waan ku faraxsanahay dadaalka dadka horumarinaya GIMPWaan khaldami lahaa maya, laakiin ma qadarin natiijada ka soo baxda.
Si aan kuu soo afjaro isdhaafsiga fikradahan -ugu yaraan aniga- Waxaan ku gabagabeynayaa iyadoo ay jiraan dhaliilahayagu -kuwa qorayaasha kale iyo tayda-, dadka GIMP sida loo qaato.
Maxay tahay faallooyin dhaleeceyn ah oo aan hadda sameeyay, qof ha dhexdhexaad ka dhigo fadlan:
Waxaan u maleynayaa inaad doorbideyso jawaab khadkan
ama kan kale
Teknoolojiyaddu waxay leedahay hal waddo oo keliya, cidina dib ugama laabaneyso muuqaalka, tikniyoolajiyadda lama kala saari karo warshadaha iyo sidaas darteed shirkadda. Xaqiiqdii, ma jiro nooc xayawaan ah oo leh tiknoolajiyad la'aan warshad la'aan iyo shirkado la'aan, ninka mooyee.
ama isticmaale doorbida inuu hoos u dhigo inuu hore u mariyo
Ku jawaab jlbaena
Waad salaaman tahay jlbaena.
Anigu si aad ah uma cadayn haddii aad iila jeedid ra'yigaaga. Waxa ay tahay in "tiknoolajiyaddu ay leedahay hal waddo oo keliya" ayaa iga dhigeysa sidaas.
Nasiib darrose, (softiweer) teknolojiyaddu ma aha oo keliya waddo, waxay sidoo kale istaagi kartaa, tusaale ahaan, shatiyada, taas oo ka hortageysa inay si raaxo leh u horumariso. Ama xitaa waa la waayi karaa haddii, sida wax waliba tilmaamayaan iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhaqaale-bulsho ay xaqiijinayaan, noocyada bani'aadamku waxay ku wajahan yihiin baabi'intooda (wax ku ool ah) (bisadaha, taa lidkeed, marwalba way joogi doonaan)
Xaqiiqdii waa tan faalladayda ugu horreysa si fiican uma aan sharraxin naftayda: Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u laabto halkii aan u dhaqaaqi lahaa wax xun oo ay ka mid yihiin dhawr shirkadood oo keli keli keli keli kaliya ku sameeya barnaamijka. Hagaag, waxaan u fadhiisan doonaa gaabis, sida GIMP.
Marka laga hadlayo xiriiriyeyaasha aad ii soo dirtay, waan akhriyay midkii ugu horreeyay.Ma waxaad u malaynaysaa inaan jeclahay inaan wax sidan oo kale ah u akhriyo? Maya. Waxa ugu quruxda badan ee aan dhihi karo ayaa ah inay aniga ila tahay maqaal gebi ahaanba la isticmaali karo xitaa marka la eego suugaanta. Xaqiiqdii qeybtaas faalintu aniga iguma jeedin.
Xidhiidhka saddexaadna ma aqaano inay tahay kaftan nooc ka mid ah maxaad uga jeeddaa, in kani yahay «dib u dhaca tikniyoolajiyadda»?
Haddii aad sii wadatay akhriska illaa iyo hadda, taas oo aan kuugu mahadnaqayo, waa inaan kuu sheegaa in waxa dillaacsan (sida nolosha qunyar socodka ah) aan aad u tixgelinayo, waxay iila muuqataa ikhtiyaar bulsheed aad u fiican, ama xitaa kan keliya, ilaa iyo inta aynaan runtii ka fekerin koritaan waara, oo hadda uun ah oraah siyaasadeed.
Hagaag waan ka cudurdaaranayaa labada faallooyin, qaabka aan u idhaahdo, maxaa churro ah, hadda waa inaan qoro waa khalad windows, laakiin maya! Waa qaladka qoraaga, maxaa yeelay iskuma qaban kartid 3 shay hal mar.
1. Ku saabsan tikniyoolajiyadda:
Had iyo jeer way sii socotaa, maxaa yeelay tallaabada xigta waa in la hagaajiyo waxa kor ku xusan (waa la mid software-ka sida mashiinnada dharka lagu dhaqdo), haddii aysan jirin wax horumar ah horumar ma leh. Arrinta shatiyaduhu waa mid cakiran, si kastaba ha noqotee, ka fakar, ma hor istaagayaan horumar muddada fog / dhexdhexaad ah (ama ha ku raacdee ama ha ku raacin), taariikhda 200-kii sano ee la soo dhaafay ayaa tuseysa, ma garanayo halka ay ku sugan yihiin waad socotaa Waxaad raacaysaa 200, laakiin maadaama aanan jeclayn noqoshada halista waxaan door bidaa inaan ka fikiro sida ugu fiican, shati ama shati la'aan, shirkado ama shirkad la'aan.
2. Aayaha dadka:
Anigu kuma raacsani, laakiin sida ay aniga ila tahay mawduuc metaphysical ah oo caan ku ah diimaha aakhiro, ma galo madashan.
3. Ku saabsan dib u noqoshada si aad horay ugu socoto:
Waa sidee si loo helo dardar.
Gimp si tartiib tartiib ah uma horumaro, kaliya waxay umuuqataa inaysan meelna usocon (isku xirka labaad, oo aad sidoo kale ka aqrisan karto joornaalka, waxaad leedahay dib u eegida isticmaale horumarsan), xiriirka seddexaadna wuxuu kuu qaadanayaa isticmaale wuxuu doorbidaa inuu soo ururiyo gimp 2.2. Waxay doorbidaa inay fadhiisato halkii ay ka isticmaali lahayd horumarka aan wax ka badan ka bixin wanka iyo isticmaalka cpu.
4. Ku saabsan degrowth:
Haddii aan ogaado mawduuca aan horay u akhriyay Si aad u fiican, waa ikhtiyaar bulsho, waxay nagu hogaamineysaa inaan u fikirno si kale oo markaa aan ka fikirno tikniyoolajiyadda si kale, aad u fiican, taasna waxay naga horjoogsaneysaa inaan wax sameysno?
Maaha maalintaydu, tani waa waxa iigu dambeeya ee aan qoro:
... horeba sharci ka yar ayaa ka badanSi aad u wanaagsan, waa ikhtiyaar bulsho, waxay nagu hogaamineysaa inaan si kale uga fikirno sidaas darteedna aan uga fikirno tikniyoolajiyadda qaab kale, weyn, taasna waxay naga horjoogsaneysaa inaan wax sameysno.
Mar labaad waad salaaman tihiin jlbaena.
Marka yaanan u gelin doodaha metaphysical, ama doodaha teknolojiyadda.
Waxba kama aan oran wax ku saabsan "dib ugu noqoshada hore u socodka" (in kasta oo aan ku samayn karo weedh fiican taas) Waxaan u maleynayaa inaad ula jeeddo tuduca aan ku idhi "Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u noqdo halkii aan u dhaqaaqi lahaa wax xun". Waxa aan rabo inaan cadeeyo ayaa ah in kali ahaanshaha ay waxyeello leedahay isla markaana ay kaligeygu ila muuqdo inuu gaabis ka dhigayo horumarka tikniyoolajiyadda.
Sababo xirfadeed awgood, waxaan isticmaale u ahaa barnaamijkaas kale ee maqaalku ka hadlayo tan iyo nooca 3 (oo aan ahayn tan CS3) oo waxaan u imid inaan u adeegsado si qoto dheer oo ku filan si aan u caddeeyo inay ka wanaagsan tahay GIMP (oo markaa kama wada hadlayno) taas, oo aanan waligey damacsanayn inaan sameeyo) ujeedku waa inaan kufaano kor uqaadida softiweerka bilaashka ah si ay usocoto mana ahan "ikhtiyaar yar" goobkasta (sida hada dhacday, tusaale ahaan, codsiyada naqshadeynta garaafka iyo sidaasna midkoodna waan ka wada hadalnay taas) Waxay ila tahay aniga in waxa soosaarka khadkani yahay inaan ugu mahadceliyo qorayaasha waxtarkooda, ku dhaleeceeyo qaab wax dhisid ah, iyo inaan ku taageerno kooxaha horumarka wax kasta oo ay u baahan yihiin, mid walbana hadba sida ay u kala mudan yihiin: adeegsiga softiweerkaas, ka qayb qaadashada dhaqaale, soo jeedinta beddelaadyo shaqeynaya, soo saarista qaybo (koodh ama muuqaallo muuqaal ah) iyo xitaa dhiirrigelinta barnaamijyada inay sii wadaan Waxaan u maleynayaa inay tahay waxtar yar in la yiraahdo "wali way ka sii xun tahay."
Waxaan u maleynayaa inaan bilowno inaan isfahamno, aniga iyo adiga.
Waad salaaman tihiin felines.
Waxyaabaha daaqada mono ayaa aniga ila muuqda, laakiin ul aniga ii ah (inaan nafsaddayda u qaadayo sawir qaadista) ayaa ah inaanay wali wax taageero ah u hayn faylasha 16-ka ah iyo taageerada faylasha RAW, in Ufraw uu yahay wax laga yaqyaqsoodo, waxyaabaha sida ay yihiin.
GIMP waa mashruuc ku socda xawaare sir ah waxaanan u maleynayaa inay tahay sababta oo ah waxay u baahan yihiin barnaamijyo badan. Waxyaabaha daaqada kaliya ayaa u muuqda mid tanaasul yar. Horumariyayaashu waxay maqleen qaylo-dhaan iyo inay dhegaha ka furaystaan ​​inay dhawaaqaan waxay la yimaadeen "xalka".
Xaqiiqdu waxay tahay inaad la shaqeyn karto GIMP "nus fiican" adoo ku rakibaya waxyaabo kala duwan, laakiin ma ahan Photoshop (mana lahan koox aadane ah oo wax la mid ah sameyn karta).
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inaan ka aqriyay dib u qorista GIMP code-keeda nooca 2.10 si aad uga dhigto mid aad u nadiif badan oo waxtar badan, iyo dabcan, si aan u soo jiito horumariyeyaal badan oo cusub maxaa yeelay sida GIMP code uu hadda yahay way adag tahay in qof yimaado oo helo. aqri.
Maqaalka xiisaha leh Tina, dhaleeceyn ujeeddo ah ayaa ila muuqata. Hubbub aad u badan oo muuqaalkoodu yahay 2.8 waqti yar ayaan ku qaatay, wax badan maahan maxaa yeelay barnaamijku waa mid xad-dhaaf ah oo aasaasi ah waxaanan kuu sheegayaa inaad gaabisay.
- Keydso: Haddii aad haysato 50 sawir oo furan oo dib loo hagaajiyay, waa inaad keydisaa 1 1 maxaa yeelay si fudud uma lihid ikhtiyaar aad wax walba ku keydiso.
- Keydso 2: Si aad u kaydiso faylka 'X.jpg' ee aad furtay waa inaad dhoofisaa, adigoo intaas ku daray xaqiiqda ah inaad kaydiso 1 × 1 tani waa waqti lumis aan caadi ahayn.
Burushyo firfircoon - ku celi fursadaha si aan macquul ahayn; Mad-madow, adkaansho, xoog? iyo inbadan.
Wacom: Jihayn? Rabitaan wax ma tarayaan, iyaguna wax ma tarayaan, maxaa burush loogu talagalay?
Xulashada Kanaalka: Mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan Photoshop, Gimp si fudud ayaa loogu qurxiyaa.
Xulashada Lakabyada: Ka sameynta lakab cusub xulashada waa geedi socod.
Soo-gaadhis: Waa barnaamij khalkhal galinta sawirka oo aan lahayn xakamayn soo-gaadhis.
Burush: Hoos udhaca kala dheereynta ilaa 1 waa dhibaato xusuus daran.
Burush: Tani waxay umuuqataa kaftan, dadkaani miyaanay aqoon MyPaint?
Marka laga reebo tan iyo waxyaabo kale, naceybka aan u qabo Gimp maahan maxaa yeelay waa barnaamij dhexdhexaad ah, waa sababta oo ah "isticmaaleyaasha waa lagu qoslaa"
- Waxay bixiyaan barnaamij, oo aadan isticmaali karin. Taasi adduunka dhabta ah lama qaban.
- Barnaamijku waa kii ugu horreeyay ee Windows ah. In kasta oo ay umuuqato mid iska cad maxaa yeelay waxay leeyihiin inta badan adeegsadayaasha, way ka fog tahay falsafadda Furan.
- In ay sidan oo kale ugu kobciyaan, waxa kaliya ee ay qabataa waa "dhaawaca sawirka GNU / Linux" marka ay jiraan barnaamijyo aad u sarreeya, Blender, Mypaint, Darktable, Rawthwrapee, Arduor, Kdenlive, iwm.
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa in Gimp ay tahay inuu kansal gareeyo, ugaga mahadceli intii yareyd ama waxbadan uu qabtay una baneeyo mashruucyada kale.
Tina, waxaad tahay haweeneyda kaliya ee wax ku biirisa balooggan, sidaas ayaan u maleynayaa, laakiin waad u qalantaa dhammaan qoraaladaada.
Waad salaaman tihiin dhamaantiin gaar ahaan Tina.
Sida isticmaale Gimp sanado badan, waa inaan dhahaa ma aqbalayo wax kasta oo lagu xusay maqaalka Tina iyo faallooyinka qaar.
Marka ugu horeysa, waa sax in la yiraahdo Gimp's interface waa la horumarin karaa ... sida Photoshop. Mararka qaarkood waxaan lumineynaa aragtida iyo dagaalka caadiga ah ee Gimp Vs. Photoshop badanaa wuu lumiyaa.
Marka hore, waxaan isticmaali jiray Photoshop sanado badan iskuna xirkeeda ma ahan midka aan maanta naqaano. Sannado ka hor waxay la mid ahayd sidii Gimp oo cidna kama caban. Tan waxaan ula jeedaa waa inaad maanka ku haysaa nooca 2.8 inuu yahay kii ugu horreeyay ee qaabka daaqadda keligiis ah la dhexgeliyo waana inaad ka fikirtaa inay tahay tallaabada ugu horreysa ee waddada in, yaa garanaya, ay noo horseedi karto wax badan mustaqbalka dhalaalaya
Marka si xun u calaamadeynta horumarka maahan mid wax dhisaya. Way kafiican tahay in loo qiimeeyo si togan oo ku haboon sida ugu haboon ugana warbixiyaan wixii fashil ama horumar ah ee la samayn karo.
Dhinaca kale, nooca `` Gimp '' ee daaqadaha badan-ka ah lama waayin, wali wuu jiraa. Dhibaatooyin badan oo aad umuuqato inaad indho indheyneyso ayaa looga gudbi karaa iyadoo la adeegsanayo qaab dhaqameed daaqado badan. Haddii aad sidoo kale nasiib u leedahay inaad naftaada u hurto naqshadeynta garaafka, waa iska caadi inaad yeelato dhowr kormeerayaal, sidaa darteed waxaad u isticmaali kartaa mid daaqadda muuqaalka iyo kormeeraha labaad si aad u muujiso dhammaan waraaqaha (iyo menus, oo waliba si madax-bannaan loo soo bandhigi karo) ), si aad u haysatid wax walba hal guji oo keliya, adoo hagaajinaya oo ka dhigaya shaqadaada mid aad u fudud.
Waxaan ula jeedaa ereyadan haa, Gimp wuxuu leeyahay dhaliilo, laakiin waxay yihiin culeys aad u dhow. U cudurdaar inaadan rabin inaad isticmaasho Gimp maxaa yeelay ma dhejin kartid palette qalabka hal khad ... si fiican, waxay la mid tahay inaad dhahdo ma dooneysid inaad hesho Ferrari sababtoo ah ma jeceshahay xarumahooda ...
Habka loo yaqaan 'CMYK' wuxuu ka badan yahay sharraxaad iyo dib-u-sharraxay soo-saareyaasha Gimp iyo dadka kale. Gimp waligiis ma lahaan doono qaab CMYK ah, sabab fudud oo ah inaan loo baahnayn waana qalad ay sameyso. Waxay noqon kartaa mid naxdin leh laakiin haddii aad fahanto sida maaraynta midabku ugu shaqeeyo kumbuyuutarka waa mid si buuxda isugu habboon Waxaa loo dhoofin karaa CMYK oo leh Gimp sanado badan adoo adeegsanaya qalab + kala duwan (kaas oo ku yimaada ku dhowaad dhammaan walxaha baakadaha gacanta ku jira). Dad badan ayaa u isticmaali jiray sannado badan dhibaato la'aan mana seegi doono "qaab CMYK" sida Photoshop, taas oo u horseedday adeegsadayaal badan oo ka tirsan barnaamijka milkiileyaasha caanka ah khaladaad culus oo ku saabsan maaraynta midabka saxda ah muddo tobanaan sano ah.
Ku saabsan 16bits, isdeji. Nooca horumarineed ee hadda jira ee Gimp horeyba wuxuu u lahaa taageero, ma ahan 16, laakiin sidoo kale 32-bit integer iyo qaabka dhibcaha. Nooca xiga ee xasilloonida ee Gimp wuxuu la imaan doonaa horumarkan cusub.
On RAW, si fiican, tani waa ganacsi sidii caadiga ahayd. Waxaa jira dad go'aansaday in Gimp ay leedahay qaybteeda horumarinta RAW. Ma fahmin sababta. Waxaa jira codsiyo aad u wanaagsan oo bilaash ah oo loogu talagalay horumarinta RAW qaar badan oo iyaga ka mid ahna waxay si qurux badan ugu xirmaan Gimp: UFRAW, RawTherapee, Darktable, Photivo, iwm. waxay haystaan ​​qalab fara badan oo ay ku hagaajiyaan RAW oo tayo badan leh.
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, Photoshop's RAW sameyste wuxuu ku saleysan yahay DCRAW, oo sidoo kale ah software bilaash ah gudahana waxaad sidoo kale u adeegsataa qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadan la soo sheegay.
Si kale haddii loo dhigo, waxa aadan ku shaqeyn karin RAW ... isna aniga ima qancinayo, maxaad rabtaa inaan iraahdo ...
Iyo sida haddii aysan taasi ku filneyn oo aysan ka tegin arrin marwalba la iska indhatiro markii laga hadlayo software bilaash ah iyo mid lahaansho, waxay yiraahdaan in badan oo kuwa aad uga cabanaya Gimp oo aad u jecel Photoshop, waxay si fiican u bixin karaan in ka badan 1.000 euro in kharashka shatiga Photoshop (maxaa yeelay waxaan qiyaasayaa inaad ruqsad u heli doontid isticmaalkeeda sharciga ah) sidaas darteedna dadka kooxda horumarinta Gimp waxay bixin karaan dhowr horumariyayaal waqti-buuxa ah si ay barnaamijku ugu qancaan si kafiican.
Laakiin tani waxay siinaysaa dood kale oo taageerayaasha noocyada "burcad-badeedda" ee Photoshop hubaal aysan rabin inay galaan ...
Marka la soo koobo: Gimp waa la horumarin karaa, sida wax kasta oo kale (xitaa Photoshop) waana barnaamij runtii awood badan oo dhinacyo badan leh. Hadda oo leh 2.8 xitaa in ka badan sidii hore. Waan fahamsanahay oo xitaa la wadaagayaa in dhaleecaynta wax laga qori karo waxyaabaha la hagaajin karo, laakiin "fatalistic" codka isbarbardhiga qodobkan wuxuu nagu casuumayaa inaan u malayno in Gimp uu yahay "qashin" markay timaado faahfaahinta Waa la horumarin karaa, laakiin sinnaba ugama dhimayso shaqada weyn ee ay qabteen kuwa horumariya.
Salaan kalgacal leh oo dhan ... oo isticmaal wax yar oo Gimp ah ... waad ku qanacsan tahay. 😉
Salu2 ee jeSuSdA 8)
Aad baad ugu mahadsantahay Ciise hadaladaada. Shaki iigama jiro in fikirkaaga uu yahay kan ugu aqoonta badan ee lagu xukumi karo barnaamijka shaqadaada iyo tabarucaada, looma baahna in la yiraahdo waxaan si buuxda ugu raacsanahay faallooyinkaaga
Dhanka kale, maqaalkaagu waa wax lala yaabo oo lagula taliyay
Taas oo aan u malaynayo inaadan ku xirmin xishood. Waan sameyn karaa, sax? 😉
Hola Xaakinka 8), Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga.
Marka ugu horeysa, waa sax in la yiraahdo Gimp's interface waa la horumarin karaa ... sida Photoshop.
Qofna maankiisa saxda ah ma diidi karo sheegashadaas, waxaad xor u tahay inaad tiraahdo si xun ayey u shaqeysaa Photoshop, maxaa yeelay bilowgii sidoo kale waxay ila tahay aniga in la horumarin karo.
Si buuxda ayaan ugu raacsanahay Photoshop isku dhafan qaabka daaqada kaliya ee nuqulkeeda CS3, in ka badan toddobo sano ka hor. Farqiga ayaa ah in markii uu isku dhafay uu sifiican u qabtay.
Taas oo aan cidina ku qaylinayn a Photoshop oo leh hal daaqad oo keliya iyo qalab lagu xirayo iyo waraaqo yar yar markii tani ay ahayd daaqad badan? Dabcan maya, laakiin markay ku darsadeen waxqabadkaas waa la soo dhaweynayay maxaa yeelay runtii way caawisaa.
Laakiin dhinaca kale waad saxantahay, waa inaad taas ka fikirto GIMP ayaa maanta qaadaysa talaabo taas ah Adobe wuxuu na siiyay toddobo sano ka hor iyo in, sidaad u tidhaahdo, laga yaabee mustaqbalka inay na siiso is-dhexgal hal hab daaqad keliya, iskama dhigayo in la safeeyey -Waxay noqon lahayd wax aad u badan in la waydiiyo- laakiin haddii ugu yaraan ku filan yahay.
Oo taxaddar, ha moogaan xaqiiqda aan ku dhaleeceynayo is-dhexgalka GIMP sababta oo ah qaabka guddi sabaynta ah waxay ila tahay wax aad iigu wanaagsan aniga, marka laga reebo xaqiiqda ah in aaladuhu aysan u kala qoqobnayn qaybo ka mid ah aaladda.
Waxaan ula jeedaa ereyadan haa, Gimp wuxuu leeyahay dhaliilo, laakiin waxay yihiin culeys aad u dhow.
Dhab ahaan Cilad-darrooyinkan ayaa ah culeys aad u dhow, maxaa yeelay adiga waa wax aan laga fiirsan, laakiin aniga ahaan maahan oo waxaan kuu sheegayaa sababta:
Waxyaabaha loo yaqaan 'CMYK mode' waa wax ka badan sharraxaad iyo dib-u-sharraxay soo-saarayaasha Gimp iyo dadka kale. Gimp waligiis ma yeelan doono qaab CMYK ah, sababaha fudud ee aan loo baahnayn waana qalad in la yeesho. Waxay noqon kartaa mid naxdin leh laakiin haddii aad fahanto sida maaraynta midabku ugu shaqeeyo kumbuyuutarka waa mid si buuxda isku waafaqsan. Waxaa loo dhoofin karaa CMYK oo leh 'Gimp' sanado badan iyadoo la adeegsanayo qalab + kala duwan (kaas oo ku yimaada dhammaanba walxaha baakadaha gacanta ku jira). Dad badan ayaa u isticmaali jiray sannado badan dhibaato la'aan mana seegi doono "qaab CMYK" sida Photoshop, taas oo u horseedday adeegsadayaal badan oo ka tirsan barnaamijka lahaanshaha caanka ah khaladaad culus oo ku saabsan maaraynta midabka saxda ah muddo tobanaan sano ah.
Waxaan si buuxda u fahamsanahay sida maaraynta midabku u shaqeyso RGB, oo u muuqda inuusan fahmin sida maaraynta midabku u shaqeeyo CMYK Waa adiga.
Maahan ku darista miiraha aniga i soo saara CMYK, ama shaandho kale oo soo bandhigaysa aagga shaqada qaab ahaan CMYK, waxay ku saabsan tahay in lagu daro maaraynta midabka runta ah CMYK si ay nooga caawiso inaan saadaalino oo aan xakameyno midabka ugu dambeeya ee saxaafadda adigoo adeegsanaya qalab ku habboon oo lagu kalsoonaan karo. Tani kuma koobna oo keliya Xogta ICC, sidoo kale waxaa ka mid ah maaraynta saxda ah ee tiro badan oo khad ah y hexachromia , iyo waxyaabo kale.
Dhanka kale, tani maahan baahi cusub, safka GIMP, oo aan lagu isticmaali karin farshaxanka garaafka waxaa la qoray wax ka yar kow iyo toban sano ka hor. Sheegashaduna waa isku mid.
Arrinta qiimaha sare ee Photoshop had iyo jeer waxay ahayd doodda sheegashada «Waa hagaag ... haddii aad bixiso Photoshop, maxaa yeelay waxay ku bixisaa GIMP inay ku bixiso horumarinteeda ». Tani iguma muuqato dood sax ah.
Marka ugu horeysa, sababtoo ah anigu ma bixinayo wax soo saar aan dabooli karin baahideyda, laakiin tan ugu xun, ma haysto dammaanad mustaqbal inuu doono. Ta labaad, maahan arrin jacayl, markii aan go’aanka gaadhayo bixinta rukhsadaha Adobe Uma sameeyo jacayl, ee waxaan u sameeyaa maxaa yeelay waan ogahay inaan iibsanayo qalab waxtar ii leh. Haddii maanta, maanta, GIMP i sii, ha i siin waxa i siiya Photoshop maxaa yeelay waxay leedahay waxyaabo aanan aniga iyo kooxdayda naqshadeynta u baahnayn, laakiin waxa aan u baahanahay me i rumee, waan iibsadaa.
Waan fahansanahay oo xitaa la wadaagayaa in dhaleecaynta wax laga qori karo waxyaabaha la hagaajin karo, laakiin qaabka "fatalistic" ee isbarbardhiga qodobkan wuxuu nagu casuumayaa inaan u malayno in Gimp uu yahay "dabin" marka waxa laga hadlayo ay yihiin faahfaahin Waa la horumarin karaa, laakiin sinnaba ugama dhimayaan shaqada weyn ee ay qabteen kuwa horumariya.
Haddii waxyaabaha la hagaajin karo ... markaa iyaga hagaaji! Hadday tahay in maqaalku yar yahay -in la isbarbar dhigo GIMP con Photoshop- oo leh cod "fatalist" qof walbaa xor buu u yahay inuu lahaado midkiisa "Sida laga soo xigtay" Haddayna qoraalkaygu sidaa u muuqdo inuu taas ka hor-tagayo, ma jiro dood u qalanta ama lagu qanci karo. Xaqiiqdu waa tan adduunka ka jirta GNU / Linux sameynta dhaliil waxay la mid tahay mahadnaq maxaa yeelay waxay ka bilaabataa sirdoonka sida ay tahay "bilaash" xaq uma laha sheegashada. Qaab ahaan tani waa run. Laakiin waxaan rabaa inaan cadeeyo wax: dhaleeceynteydu ma ahan mid hoos u dhigeysa dadaalkii ay sameeyeen wiilasha GIMP -leh dhammaan xaddidaadaha ay ku dhacaan- laakiin waxaa jira waxyaabo aan ra'yi ahayn, waa xaqiiqooyin. Tartanka suuqa dhexdiisa -aan ku jirin GNU / Linux meesha sababo cad awgood GIMP waa dhar- GIMP 2.8 sidii wax soo saar kama dambays ah uma tartamayso. Waad isticmaali kartaa dhammaan sababaha aad leedahay, qaar aad ansax u yihiin kuwa kalena aan ahayn, laakiin kuma dhaqaaqi karno taranka iyo xaqiiqda keliya ee ah GIMP Waxaa soo saaray koox yar oo xaddidan oo culus, waa software bilaash ah waana bilaash in la xiro wixii xun wixii wanaagsanna la sheego oo keliya. Taasi waa aqbalida iyo qiil u sameynta dhexdhexaadnimada.
Qira oo aqbal taas GIMP "Waxay leedahay cillado aad u hooseeya oo cuf isjiidadka leh" Si kale haddii loo dhigo, waxay leedahay cillado daran, ha ahaadeen kuwo qaraabo ah iyo haddii kale. Taasina waa waxa ay tahay in la dhaleeceeyo ... cilladahaas halista ah! Waana inaad dhaleeceysaa maxaa yeelay taasi waa waxa muujinaya daciifnimada iyo daciifnimada GIMP waana fursadaha horumarinta.
Haddii kooxda horumarinta ee GIMP Wuxuu u shaqeeyaa hiwaayad ahaan, inuu wax ku darsado softiweer bilaash ah mana awoodi karaan xirmada maxaa yeelay waxaan u fahmaynaa habkaas. Runtiina, shaqada ay qabtaan waa la mahadiyey…. laakiin maaha sheyga ugu dambeeya.
Mar labaad waad salaaman tihiin,
Marka hore, aad baad ugu mahadsantahay sida aad uga jawaabtay ra'yigeyga oo aad i siisay fursad aan si fiican ugu fahmo mowqifkaaga.
Waxaan u maleynayaa in faallooyinkaani ay sifiican u dhameystireen waxa lagu sheegay maqaalka, laga yaabee inaad qeexdo qaar ka mid ah fikradahaas aad ku muujineyso faalladaada qodobka dhexdiisa inay ka fogaan laheyd dhaleeceynta qaar naga mid ah ay ku shubeen. 😉
Tusaale ahaan Faalladaada ku saabsan daaqadda keliya ee 'Gimp' waxaad ku qeexaysaa dhaleeceyntaada si ka fiican oo, ugu yaraan aniga ahaan, way ka yar tahay "fatalistic" ka asalka. Taas oo aniga ila muuqata.
In kasta oo ay tahay faahfaahin yar, CS3 waxay soo baxday 2007, 5 sano ka hor. Tani waxay siineysaa Gimp bilowga sanadka 2 si loo hagaajiyo qaabkeeda daaqada hal hehehe 😉
Marka laga hadlayo "isku xirnaanshaha" cilladaha, waxaan arkaa inaad si fiican u qeexday waxaanan u maleynayaa in faallooyinkaaga iyo kuweygaba si cad loo arkay in dhibaatooyinka uu Gimp yeelan karo (dhinacyada ay sheegaan) aysan aheyn inay saameyn ku yeeshaan dhammaan isticmaaleyaasha isku mid. Xaqiiqdii, waxaan rabay inaan arinta u keeno berrinka inay jiraan isticmaaleyaal aan wax saameyn ah ku yeelan haba yaraatee. Si kale haddii loo dhigo, dhibaatooyinka Gimp waxay noqon doonaan mid ama mid kale qaab aad u kala duwan waxayna kuxirantahay astaanta isticmaalaha.
Haddii aan ku dhaleeceeyay maqaalkaaga arrintan, waa taas (oo haddii aad dib u akhrido maqaalkaaga waxaan u maleynayaa inaad igu raaci doontaa) waxay u muuqataa in khaladaadka aad ogaato ay baabi'inayaan isticmaalka Gimp guud ahaan ... waxaana u maleynayaa taasi waa cadaalad daro.
Dhinaca CMYK, waa hagaag, waxaan joognaa heer aan isleeyahay ma jiri doono dib u heshiisiin dhexdeena ah. hehehehe.
Waxaan u maleynayaa in goobaha sida masaxaadka khadadka, shaqada CMYK, iwm. waa in lagu daadiyaa madbacadaha. Waa run inaan kujirno marxalad kala guur ah iyo in madbacado badan ay la shaqeeyaan mashiinno ay tahay inaad u dirto faylasha CMYK iyo inay wali jiraan daabacado kooban oo ka shaqeeya RGB (taas oo ah halka mustaqbalku u socdo) ... marka Waan fahansanahay inay jiraan dad raba inay ilaaliyaan dhanka badalashada ee dhinaca nashqadaynta. Waxaan u ololeeyaa in habsami u socodka lagu hayo ilaa iyo inta suurtogalka ah ee RGB iyadoo la adeegsanayo maareynta midabka saxda ah iyo in madbacaddu ay ku hagaajiso mashiinadooda daabacaadda ugu habboon.
Arrimaha ay ka mid yihiin hexachromia waa curyaanimo aan shaki weyn ka qabo in Gimp uu gebi ahaanba ka adkaan doono, sababo la xiriira astaamaha iyo qaababka u gaarka ah mashruuca. In kasta oo ay jiraan waxqabadyo halkaa ka socda oo na siin kara waxyaabo lama filaan ah oo farxad leh haddii lagu fulin karo dareenkan….
Tan dambe waxay kuxirantahay arinta taageerada dhaqaale ee Gimp. Marka hore, ma aqaano inay taasi tahay kiiskaaga, laakiin inta badan kiisaska, dad badan oo dhaleeceeya Gimp oo u maleeya Photoshop waxay adeegsadaan noocyo "bilaash ah".
Haddii aad tahay mid ka mid ah xirfadlayaal daacad ah oo isdaba joog ah oo si Katoolik ah u bixiya barnaamijyada ay adeegsadaan, waan kugu hambalyeynayaa, ra'yigaaguna wuu leeyahay, intaas uun, oo lagu daray isku xirnaan.
Hadda, adigoo u maleynaya in Gimp uusan ku siineynin 100% waxaad u baahan tahay, laakiin taasi, laga yaabee, waxaad jeclaan lahayd inay ku siiso berrito, laga yaabee inay sidoo kale la jaanqaadi karto inay ku deeqdo qaddar yar oo lagu taageero mashruuca.
Waxaan ula jeedaa tan marar badan waxaan ka dooneynaa waxbadan kuwa soo saara mashaariicda bilaashka ah sida ay nooga dalbadaan (taas oo ah wax yar ama aan waxba aheyn) waxaana lumineynaa aragtida ah inay caadi tahay in wax la waydiiyo oo fikrad laga dhiibto si mashruucu u noqdo mid horumar leh jihada ay isticmaaleyaashu rabaan, laakiin sida ay ugu habboon tahay in la sameeyo dhaleeceyn wax ku ool ah oo ku saabsan mashaariicda softiweer ee bilaashka ah, sidoo kale waxaa wanaagsan in la sameeyo wax yar oo is-dhaliil ah oo aan isweydiinno haddii aan si daacadnimo ah ugu biirnay isla heerka aan dalab ...
Marwalba waxaan qabaa dareenka ah maya ...
Maaha aqbalida ama dhiirigelinta dhexdhexaadnimada, laakiin waa inaad yeelato dareen gaar ah iyo aragti waxa kasta oo ay yihiin ... iyo, sidoo kale, sidoo kale ku saabsan isu dheellitirka xaqiiqda ah in Gimp uu xor yahay waa astaamo culeys badan leh. Mararka qaarkood sidoo kale waxaan dareemaa in ay jiraan dad badan oo ka hadlaya Gimp inuu xor yahay, laakiin lama qiimeeyo ku filan marka ay timaado la kulanka software kale ee aan ahayn ...
In kasta oo, waxaan garwaaqsanahay in tani ay tahay mid shakhsiyan ah oo aan qof walba laga fili karin inuu qiimeeyo xorriyadda barnaamijka iyo naftooda si isku mid ah. 😉
Aad baad ugu mahadsantahay Tina, inaad la wadaagto aragtidaada. Ku dhiirrigeli inaadan ka tegin Gimp dhinac, xitaa haddii aad isticmaasho Photoshop, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay sii wadi doonto inay na siiso qanacsanaan weyn. 😉
«Iyo in ay jiraan wali madbacado kooban oo ka shaqeeya RGB (taas oo ah halka mustaqbalku u socdo) ...»
Waa inaad kaftamaysaa, sax? Just Maalin uun baad sameysay… Iyo usbuuca oo dhan, mahad wiil! 😀
Runtii wax fikrad ah kama lihid waxa loo yaqaan "K". Ma qiyaasi karo inaan buug ku daabacayo RGB, waa inaan isticmaalnaa muraayadaha 3D 😀
"Ma jiro faallo nacasnimo ah, kaliya nacasyada wax faaleeya" -Albert Einstein.
Wax fikrad ah kama lihid waxa aad ka hadlaysid, wax fikrad ah kama lihid cidda aad la hadlayso Ciise….
Adiguna wali ma ogid waxa "K" loo adeegsado
Mustaqbalka ... buugaag ku jira 3D. 😀
Halloo Lex .RC1,
Waa inaad noqotaa Musharaxa Siidaynta 1 ee Lex ... laga yaabee markay nambarka 1.0 uu soo baxo inay sixi doonaan cilladaha waxbarasho la'aanta iyo aqoonta.
Inuu kaa ilaaliyo inaad qoslayso oo aad wax yar dukumiinti gareyso, xoogaa waxoogaa yar oo ku saabsan "isugeynta dijitaalka" waxaadna ka heli doontaa waxyaabo sidan ah:
“Waxay oggol yihiin daabacaadda buugaagta sawirrada, buug-yaraha iyo waxyaabaha kale ee garaafka ah qaybaha.
Waxaan magacaabi karnaa seddex nooc oo tiknoolajiyaddan ah:
1 - Nuquleyaasha korantada ku shaqeeya ee xawaaraha sare isticmaalaya toner adag, tusaale ahaan Xerox DocuColor.
2 - Nuqulleyda korantada xawaaraha sare ku shaqeeya oo isticmaalaya gasacadaha dareeraha ah, sida taxanaha HP Indigo
3 - Digital Offset (DOP) waa nidaam iskudarsanaya daabacaadda iska caabinta dhaqameed ee leh nidaamka dhalinta saxanka dhijitaalka ah isla qalabka daabacaadda. Waa nidaam ku habboon socodsiinta 500 ilaa 10.000 nuqul.
Xaaladahan oo dhan sawirada sawir-qaadista ah ayaa la baarayaa, taas oo ah, loo beddelay dhibco daabacaadda CMYK. Xaaladdaani waxay muujineysaa xaddidyo kala duwan oo loogu talagalay hagaajinta muuqaalka muuqda ama fiiqista, faa'iidada dhibcaha, u beddelashada khad madow, iyo qiyam kale
Waxaa jira weedh Einstein ah oo laga yaabo inaadan garanayn, maadaama aan arko inaad jeceshahay shukaansiga, waan kuu tilmaami doonaa haddii aad rabto inaad qorto: «Waxa ugu badan ee Caalamka ku jira ma aha Hydrogen, laakiin waa nacasnimo»
Waad salaaman tahay JesuSdA, maxay farxad ii tahay inaan aqriyo faallooyinka sidaada oo kale ah iyo kuwa bisadaha dhaqsaha badan, waxaan rajeynayaa in lagugu dhiirigeliyo waqti ka waqti inaad kaqeybqaadato gelitaanka barta, runti waa la qadarin lahaa. Salaan.
Aad baad u mahadsantahay ahdezzz!
Maqaalkani wuxuu u muuqdaa mid aad u yar oo casaan ah oo caqli-gal ah markii la doonayo in la isbarbardhigo nooc sida loo sameeyay sida PhotoShop-ka hadda jira iyo dhallinyarada Gimp, ma waxay la mid tahay isbarbardhiga Win95 iyo Win8 ma saxbaa in isbarbardhiggan la sameeyo
GIMP waa codsi heer sare ah, oo u baahan horumar? Hagaag, haa, waan xasuustaa isticmaalka noocyadii hore ee PhotoShop waxayna ahayd (marka loo eego kuwa hada jira) mid aad u dhib badan laakiin maadaama wax walboo hagaagaan, waa in laga filaa in GIMP sidoo kale sameyn doono, ma filan karno GIMP inuu la mid noqdo PhotoShop ( muddo gaaban) maxaa yeelay waxay la mid noqon doontaa inaad doonaysid inaad sameysid gogol shay oo leh kheyraad badan (lacag, ganacsi, iyo barnaamijyo dhabarka gadaashiisa ah).
Gaaritaanka Photoshop wuxuu noqon doonaa waddo dheer, laakiin haddii aan sii wadno inaan ka fikirno in GIMP ay la mid noqoto PhotoShop, waa inaad ka fogaato rabitaanka inaad abuurto wax ka duwan laakiin sida shaqeynaya.
Waxaan sii wadaa inaan ku sharaddeeyo adduunka xorta ah tan iyo markii ay ku muujisay codsiyo badan oo ay qabatay illaa iyo hadda inay bixin karaan beddelka agabyada macaamiisha ee gorgortanka weyn leh, laakiin ma heli karno wax walba markii ugu horreysay, waxay qaadataa waddo dheer iyo waa inaan noqono bukaanno yar.
Adobe Photoshop sii deynta bilowga ah: 10 Febraayo 1990
Sii deynta hore ee Gimp: Enero de 1996
Dhibaatada qaangaarka waxay soo koraysay 16 sano, 6 way ka yartahay dadka waaweyn Photoshop.
Markii ugu horeysay ee la sii daayo kernel-ka Linux wuxuu ahaa: Ogast 25, 1991
Haddii aad sii wado hubinta taariikhaha bilaabista ee barnaamijyada hoggaaminaya adduunka bilaashka ah, waxaad ka heli kartaa waxyaabo xiiso leh: kde el desktop wanaagsan Linux Waxaa markii hore la sii daayay bishii Luulyo 12, 1998, laba sano ka dib ciribtirid.
Sikastaba, waa inaad ka taxaddartaa doodaha qaarkood.
Xawaaraha horumarka ee KDE lama barbardhigi karo kan GIMP. KDE 1 wax yar ayey ku leedahay KDE 4. Taasina waa iyada oo aan la tixgelin in KDE ay tahay xirmooyin codsiyo ah, oo aan kaliya ahayn desktop.
Waan ka xumahay, kumbuyuutar kumbuyuutar ah (desktop) waa nooc codsiyo ah oo loo soo saaray qaab ay u midaysan yihiin oo sidaas iyo sidaas iyo sidaasba ay tahay, sidaa darteed kde waa desktop, haddii aad halkan ka shakisana waxaan ka shakisanahay inaad aqoon badan u leedahay waxa aan nahay ka hadalka (oo anigu ma dhigi doono wax xiriir ah waa mid aad u fudud in la sameeyo raadin macluumaad ah).
Si sax ah xawaaraha horumarka ee kde iyo gnome iyo blender iyo kernel iyo libreoffice iyo emacs iyo vim iyo be lama barbar dhigi karo tan gimp. Sidaa darteed, kuwa aan lahayn awoodda is-dhaliilintu waxay si fiican u weydiin karaan sababta? (mana dhahayo ma heli karaan sababo ay ugu dhaqsaha badan sida ay rabaan)
Dabcan KDE1 waxba kuma laha KDE4, waayo? Waa hagaag tahay maxaa yeelay waxaa jira gadaal 14 sano oo horumar ah. Waan fiicnaan lahayn hadaanay ahayn.
Desktop-ka KDE waxaa lagu magacaabaa Plasma. Marka waa inaad iska hubisaa aqoontaada oo aad garataa in KDE SC 4 AAN KELIYA AHAYN DESKTOP.
Isbarbardhigga waqtiga-bannaan maaha mid wax ku ool ah adduunka barnaamijka (Waxaan u maleynayaa). Xaaladdaas oo kale waxaad isbarbardhigi kartaa Gimp iyo Krita ... Krita, oo ka dhow Gimp oo aad uga wanaagsan, waxaa soo saaray KDE iyo habka aan ugu rakibo miiska Gnome oo leh qolofka 'Unity ...'
Waxaan kuu daynayaa dhowr xiriiriye si aad u ogaato. Marka ugu horeysa waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabaha soo socda:
KDE wuxuu nolosha ku bilaabay jawi desktop ah. Maaddaama waxqabadyadu ay kordheen, KDE hadda waa koox caalami ah oo abuureysa software bilaash ah oo furan.
Tan macnaheedu waxa weeye in barnaamijyada bulshada ee KDE ay wada shaqeeyaan si ay kuu siiyaan khibrada ugu fiican ee suurtogalka ah. Tani macnaheedu maahan inaadan isticmaali karin codsi KDE ah haddii aadan isticmaalin desktop-ka KDE? Xaqiiqdii. Iyada oo gacan laga helayo hal ama laba maktabadood oo dheeri ah codsiyada waxaa loo isticmaali karaa waxkasta oo desktop ah. Waxaa intaa dheer, barnaamijyada qaarkood kuma shaqeyn karaan Linux - qaar ka mid ah aaladaha cusub ee internetka, casriga iyo kiniiniyada ayaa leh codsiyo KDE!
Noocyo badan oo barnaamijyo ah ayaa loo heli karaa si loo waafajiyo baahiyaha isticmaale kasta, laga bilaabo tifaftireyaasha qoraalka fudud ee awoodda badan ilaa kuwa maqalka iyo fiidiyaha leh illaa jawiga horumarka is-dhexgalka leh ee ugu casrisan. Sidoo kale, codsiyada KDE waxay leeyihiin muuqaal isdaba-joog ah oo ka muuqda miiska oo dhan, iyagoo ku siinaya khibrad raaxo leh oo caan ah markaad adeegsanayso barnaamij kasta oo KDE ah. Lixdii biloodba mar ayaa nooc cusub oo casriyeysan oo tiro badan oo codsiyo ah la siidaayaa - loona yaqaan 'Compilation Software' (SC).
Macluumaadka ku saabsan KDE:
Macluumaadka «Plasma Desktop»:
Laakiin maxaa ku dhacaya neophytes? KDE waa a deegaanka desktop waadna fahmi kartaa waxaad rabto jawiga desktop-ka.
1. Ha ku khaldin bulshada KDE desktop-ka KDE
2. Ha ku qaldin desktop-ka plasma, oo ah qayb ka mid ah kde, iyo guud ahaan. Mise waa nepomuk (semantic-desktop) sidoo kale desktop?
3. Tan iyo goorma ayey qasab tahay in lagu ordo codsiyada loo sameeyay desktop-ka desktop-ka?
4. Si fiican u aqri xiriiriyeyaashaada.
Qaybinta Linux oo aan ku beddelay Windows XP wuxuu ahaa Debian Sarge (iyo markii aan tijaabinayay), weli waxaan hayaa sanduuq ay ku jiraan 5 CD oo ah xirfadle SUSE LINUX oo aan ka soo iibsaday bakhaar weyn. Waan ogahay waxa deegaanka desktop yahay, waan ogahay waxa maareeyaha daaqadu yahay, waxaan isticmaalay kde oo lagu soo ururiyey ikhtiyaarka ma-semantic-desktop (haa, damn nepomuk), si kastaba ha ahaatee waxaan ka ogahay wax ku saabsan software bilaash ah
Sida iska cad anigu kama sii wadi doono mowduucan, haddii aad rabto inaad sii wado waxaan kugula talinayaa inaad sidaas sameyso aquí.
@jilbaena Fadlan naftaada ha saarin diyaarad ka sarreysa. KDE WAA jawi desktop markii ay dhalatay (deegaanka caanka ah ee loo yaqaan 'Kool Desktop Environment'). Hada waa dhamaatay. Ma dhihi kartid in wax kasta oo KDE SC 4 ah ay ka mid yihiin desktop-ka, maxaa yeelay "isku-duwidda softiweerka" waxaa ka mid ah aaladaha horumarinta iyo barnaamijyada aan wax badan ka qaban desktop-ka.
Ku saabsan Plasma, waxaan ku celinayaa inaad khaldan tahay. Desktop-ka 'Plasma' waxaa iska leh Goobaha Shaqada ee 'Plasma Workspaces', oo ficil ahaan ay ku jiraan dhammaan codsiyada ka tirsan desktop-ka. Waxaad ku ordi kartaa inta ka hartay codsiyada nidaam kasta oo qalliin.Ma waxaad ii sheegaysaa inaan ku wadi karo qaybo ka mid ah desktop-ka KDE nidaamyada kale? Marmar miyuu ka mid yahay desktop-ka? Kopete iyo Kajongg sidoo kale waxay ka mid yihiin desktop-ka?
Waxaad dhihi kartaa Plasma waa uun adeegsade isticmaale ee maahan desktop (wax walboo waxay kuxiranyihiin waxaad uga jeedo desktop). Laakiin kuma adkeysan kartid in KDE SC 4 ay tahay kaliya desktop (ama jawi desktop ah), maxaa yeelay sida ay tahay GNOME waa jawi desktop ah iyo kaabayaal horumarineed oo leh barnaamijyo loogu talagalay kuwa wax dhisaya (taasna macquul maahan inaad ka fikirto qayb ka mid ah desktop).
Waan iska indhatiray iskuxirkaaga Wikipedia. Hada waan arkay bogaasina waa qosol. Waxay u tixgeliyaan KDE SC jawi desktop ah (way kugu raacsan yihiin adiga) laakiin markaa waxaan arkaa in sida ay qabaan ay tahay midnimadu inay tahay jawi desktop ah (hahaha) iyo marka loo eego shuruudahaaga waxyaabahaas oo kale lama tixgelin karo. Isha laga helayaa maaha mid aad loogu kalsoonaan karo, miyaadan u malayn?
Waxaan ku dheganaanayaa qeexitaanada rasmiga ah. Kuwa kuwa dayactira mashruuca KDE. Xidhiidhyadayda ayaa caddeeya in KDE aysan ahayn kaliya desktop. Waxa Wikipedia ku dhaho ma daneeyo.
Waxaan kaaga tagayaa xiriiriye kale oo ku saabsan Plasma (kii hore kuma qancin):
Waxaan qoray inaanan ka jawaabi doonin, laakiin waa inaan idhaahdaa kuma jiro diyaarad kasta oo ka sarreysa, waxaan ku jiraa diyaaraddaas.
Sida aan qabo aragti ah inaad mid leedahay melopea (dhibic 2) Kuu qancin maayo inaad ku jahwareerinayso Mashruuca KDE kombuyuutarka KDE (isla waxbaa ku dhaca Gnome).
Waxaan horeyba kuu siiyay xiriir aad ku sii wadi karto sixitaanka dhamaanteen kuwa khaldan.
Dhamaanteen khaladaad ayaan ku wada jirnaa noloshan, khaladaad badanaa waan sameeyaa. Waan ka wada hadli karnaa waxa aan u fahamnay miis ahaan ama waxaan u wici karnaa sida aan rabno. Waxa aadan sameyn karin waa inaad ka gudubto xiriiriyahayga oo aad ku dhex dhuumato xaqiiqda ah inay jiraan aqlabiyad u maleynaya sidaada oo kale. Xaqiiqdu waxay tahay in KDE ay ugu yeerto desktop-kooda PLASMA iyo in KDE SC 4 kaliya maahan jawi desktop ah, sida ay iyagu qabaan. Haddii aad ii sheegto in dadka KDE ay khaldan yihiin markaa waxaad iga tagaysaa muran la'aan (iyo adigoon rabin inaan kula hadlo).
@jilbaena Waxaad ahayd isha dhiirrigelinta ee boostada boggeyga:
Markaan runta u hadlo daaqada kali-kaydku waa wax aan isticmaali karo, laakiin runtii uma isticmaalo GIMP qaab xirfad leh waxaan u isticmaalaa oo keliya markaan caajiso iyo waqti ka waqti si aan u saxo faahfaahinta qaar ka mid ah sawirrada (ma ahan xirfadle ) oo aan u qaato waqti ka waqti. Daaqada daanyeerku maahan waxa aniga i dhaqaajinaya laakiin waxaan jeclaan lahaa in badan oo ka mid ah shaqada waji-duubashada ah oo had iyo jeer la horumarin karo, hadda waxaan tixraacayaa inaan sii wado u kuur-galka mawduuca waxaanan kuu daayay inaad go'aansato software-ka aan isticmaali doono mar hore ayaan ka doortay tan la kulmay eeyga ranjiyeyaha oo in ka badan ama ka yar aan marwalba awooday inaan raaco casharrada loogu talagalay Photoshop ee ka socda GIMP oo i rumee, saameynta waxaa lagu gaadhay in Photoshop iyo CorelDraw midkoodna uusan quudhsan.
GIMP ma dhageysato adeegsadayaasheeda? waxa layaab leh ayaan qabaa!
oo waxaan aaminsanahay in ubuntu kaliya ay taas sameysay: S
Waxay ila tahay inay wali khatar badan tahay.
Ma noqon karto inaadan haysan ikhtiyaar fudud oo aad ku siin karto xuduudaha ama hooska qoraalka. Waxaan u arkaa inay tahay wax aasaasi ah oo Photoshop uu ka keenayo sannado ka hor
WINDOWS 8 MAWDUUC WAA CADARAD IN AAD KU HAYSATO SAWIRKA
GIMP WAA AAD UGU FUDUD SOFTWARE Waxaan rajeynayaa inay sii socotaan
"Waa inaad barataa qoraalka si wanaagsan."